चाडपर्वका बेला कालाबजारिया सलबलाइरहेका छन्, सरकारको ध्यान कता छ ? : सुजाता परियार - Nepal's Digital News Paper
चाडपर्वका बेला कालाबजारिया सलबलाइरहेका छन्, सरकारको ध्यान कता छ ? : सुजाता परियार
काठमाडौं । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद सुजाता परियारले चाडपर्वका बेला बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहे पनि यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको बताएकी छन् । अनुगमनको पाटो फितलो देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘चाडपर्वको मुखमा हरेक कुरामा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । सम्बन्धित निकायको ध्यान कता छ ?’, बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भनेकी थिइन्, ‘अनुगमनको पाटो फितलो भएको छ । अनुगमन प्रभावकारी पार्नुपर्छ । जनताले सुशासन र सरकार भएको महसुस गर्न पाऊन् ।’
नेपालीहरूको महान पर्व दसैं, तिहार, छठ नजिकिँदै गर्दा जताततै महँगी र भ्रष्टाचार बढेको उनले बताइन् । ‘कालाबजारिया सलबलाइरहेका छन् । चिनी माफिया सलबलाइरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ । खाद्यान्न वस्तुलगायत हरेक हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने वस्तु सागसब्जीदेखि लिएर फलफूलमा मिसावट भएको छ । विषादी छ । खाद्यान्नमा मिसावट भएको छ । म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न बजारमा बिक्री भइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘यसबाट जनता मारमा परिरहेका छन् । यो दुईतिहाइ सरकारको ध्यान कतातिर गएको छ ?’
उनले गाउँका गरिब जनताले पालेका कुखुरा, गाई, भैंसीलगायत अन्य वस्तुमा चर्को कर उठाइएको उल्लेख गरिन् । तर, कसैलाई भने सरकारले नै लाभकर पनि छुट गरिरहेको कुरा बारम्बार उठिरहेको उनले बताइन् ।